Wasiirada Caafimaadka Soomaaliya iyo Shiinaha oo kulmay – Radio Daljir
Maajo 15, 2015 3:23 b 0
Jimco, May 15, 2015 (Daljir) — Wasiirka caafimaadka Soamaaliya marwo Xaawo Xasan Mohamed oo booqaneysa dalka Shiinaha ayaa waxa ay wadankaasi kulamo gooni gooni ah kula qaadatay madax kasocota dalkaasi oo ay kamid ahayd wasiiradda caafimaadka ee dalkaasi maewo Li bin.
Mas’uuliyiintaan ayaa kulankooda uga hadlay qodobo dhowr ah oo ay kamid ahaayeen xoojinta xiriirka labada dowladood gaar ahaan wasaaradaha caafimaadka ee labada wadan iyo sidii Shiinuhu Soomaaliya gacan uga siin lahaa taabagelinta caafimaadka.
Wasiiradda caafimaadka ee Shiinaha ayaa qaadday taageero dhan walba leh oo ay siineyso dawladda Soomaaliya, Sida in dib loo dhisa dhamaan xarumihii caafimaadka ee dawladda, taageera deg deg ah oo la gaarsiinaayo. Dadka uu ku fatahay wabiga shabelle ee magaalada Jowhar iyo qaxootiga ka soo cararay dalka Yemen.
Ugu wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa wax aay booqatay gobolka Jilin halkaas oo ay kula kula yeelatay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha Shiinaha, waxaana ay war farxadleh ku tilmaamtay sida ay ardaydu heeganka u yihiin.